जीवनको सुन्दर माधुर्यता ! « Ok Janata Newsportal
जीवनको सुन्दर माधुर्यता !
काठमाडौं । सामान्यतया, कुनै पनि वास्नाले मानिसलाई कसरी र कति हदसम्म आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा मानिसको शरीर र मनको स्तरमा भर पर्ने गर्छ । त्यसैले त, कहिले काहीँ अनायासै हिँडिरहेका बेलामा समेत हामीलाई कुनै वास्नाले अचानक मोहित पार्ने गर्छ । कति मानिसको दिमागमा यति धेरै नकारात्मकता भरिएको हुन्छ कि उनीहरुलाई कुनै बास्ना महसुस नै हुँदैन । किनभने एक निश्चित बास्ना महसुस गर्नका लागि मानिसलाई एक विशेष किसिमको संवेदनशीलताको आवश्यकता पर्दछ ।
हो, प्रविधिले हामीलाई सक्षम बनाएको छ । प्रविधिका कारण नै हामी अघि बढ्न सफल भएका छौं । यस्ता प्रविधिलाई हामी राम्रो काममा प्रयोग गर्न सक्छौ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर जति जति यस्ता प्रविधि वा स्मार्टफोनको व्याट्री सकिन थाल्छ, तब यसलाई चार्ज गर्ने चार्जरको अभावमा हामी स्वत गायब हुन थाल्छौ । व्याट्रीको अभावमा स्मार्ट फोनको अभावले हामी अचानक मुर्ख जस्तो लाग्न थाल्छौं । अर्थात हाम्रो स्मार्टनेशको मुख्य कारण भनेकै हाम्रो फोन हो ।
जीवनका प्रत्येक चक्र आफ्नो स्थानमा सर्न सक्छ । तर विशेषगरी मणिपूरक बढी गतिशील हुने भएकोले यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर भइरहने गर्छ । किनकी यो यस्तो स्थान हो, जसमा शरीरमा रहेको ७२ हजार नाडि एक आपसमा मिल्दछन् र फेरी जोडिने गर्छन् । त्यसैले त, मानिसहरुले आफ्नो मणिपूरकलाई अलग अलग किसिमले गति दिन सक्छन् । जबकी स्वाधिष्ठान भनेको आत्मा र स्थान हो । यो अवचेतन मनको त्यो स्थान हो जहाँ मानिसको अस्तित्वको प्रारम्भमा गर्भैदेखि जीवन अनुभव र आफ्नो छायाँ संग्रहीत रहन्छ ।
मुलधारले हाम्रो सबै कर्मको भण्डारण गर्छ भने स्वाधिष्ठानले यसलाई सक्रिय तुल्याउँछ । स्वाधिष्ठानले जागृति स्पष्टता र व्यक्तित्वको विकास गर्छ । त्यस्तै, मुलधारको सम्बन्ध अचेतन मनसित हुन्छ जहाँ पहिलेको जीवनको कर्म र अनुभव संग्रहित हुन्छ । यसले नै हाम्रो भावी प्रारम्ध निर्धारण गर्छ । र, यो मानिसको व्यक्तित्व विकासको जग पनि हो । यसले मानिसमा स्फूर्ति, उत्साहको प्रवाह गर्नुका साथै व्यक्तित्वको विकास गर्छ ।